MA YUSUF GARAAD BAA QOREY MISE CID KALE? – hogaanka.org
MAQALEY WAR LAY MA LAGUU WARAMEY WAXA UU FARMAJO YIDHI
MA YUSUF GARAAD BAA QOREY MISE CID KALE?
Akhristow beryahan dambe waxaa batey qoraalada aan laga taxadirin ee fidmada looga dhex abuurayo bulshada Somaliland dhexdeeda taas oo hadii aan sharciga wax lagaga qaban isku dirka dadka walaalaha ah ay keeni doonto dhibaatooyin hor leh iyo is nacayb bulshada dhexdeeda ah.
Si kastaba ha ahaatee waxaa loo bahan yahay in looga digo dadka qoraalo aan laga baaraan degin ku soo qoraya baraha bulshada kuwaas oo
Dhibaato u keeni kara dadka leh baraha lagu baahiyo wararka oo aan masuuliyadeeda ka baxsan Karin sidaa darteed
Waxaa muhiima in la is xasuusiyo waxa ka dhalan kara fidmada ay keeni karto haydaha nabadgelyada,iyo kuwo xaquuqal caalamku raali kama ah in la abuuro isnacayb bulsho,iyo isku dir midna dumuqraadiyadana kama mid ah in dagaal sokeeyo oo dano gaara laga lee yahay loogu soo gabado xoriyatal qowlka iyo isku dirka dadka Somaliland ee haduun ka soo kabanaya dhibaatadii loo geystey shirci ogolina ma Jiro in la isku diro dad walaalo ah oo nabad kuwada nool hadaba waa laga marmaan in dadka Somaliland iska jiraan isku dirka dhexdooda ah ee loogu gabanayo adeegsiga social media yaha.
Sidaa darteed dawaladaha geeska afrika iyo yurub mareykanka iyo kanadaba waxaa la gudboon in wixii sharciga caalamiga ah iyo kan dawladaha ee gaarka ahba loogu wargeliyo dadka dabka ku shidaya arimaha Somaliland ee gudaha iyada oo la og yahay xasuuqii dawladii Somaliya ka geesatey Somaliland oo ilaa hada hal qofna loo maxkamadeen tacadiyadii halkaa ka dhacay taasina ay keen tay in maanta la yidhaado saxbey ahayd in dadkaa la xasuuqo.
Si kastaba ha ahaatee hayaha xuquuqda adamiga ee Somaliland waxay ku fashilmeyn iney dabagalaan habeeyaan lana kaashadaan haydaha caalamiga ah dambiyadii xasuuqa eek a dhacay Somaliland .
Yusuf garaadna waxaa looga baahan yahay in uu dhameystiro warbixintan cadeeyana ujeedada uu ka lahaa iyo wakhtiga ay dhacdey sabata oo ah warbixintani uma muuqato mid dhab ah oo nin suxufi ahi qorey sida yusuf garaad oo kale,balse waxaa looga baahan yahay in uu cadeeyo in uu isagu qorey iyo in kale.
Akhristow warbixintani waa tan ee akhriso waxaa soo saartey hadhwanaagnews.com ee la soco:
Yuusuf Garaad Oo Warbixin Uu Soo Bandhigay Kaga Hadlay Xasuuqii SNM Ka
Gaysatay Boorama Iyo Dilla
Borame waxaa ku goobtay colaad laba jiho ka haysata, dad ku soo jabay oo ka soo qaxay magaalooyin kale siiba Hargeysa iyo Gebiley, Qaxooti ka yimid Ethiopia oo xeryo magaalada bannaankeeda ah ku sugan iyo jilaal adag oo daba dheeraaday.
Colaaddu waxay ka socotaa laba jiho. SNM waxay badiyaa ka soo weerartaa dhinaca Bari. Beel kale oo inta badan ay xulufo ahaan jireen reer Borame, Goblka Awdlana ay wada yaallaan, ayay dhowr jeer isku laayeen dhinaca woqooyi taas oo markii dambe keentay in ay kala qaxaan labada beelood. Isku dhaca labadan beelood, Borame waxay markaas ku eedeyneysaa saameyn SNM.
Colaaddu waxay ka socotaa laba jiho. SNM waxay badiyaa ka soo weerartaa dhinaca Bari. Beel kale oo inta badan ay xulufo ahaan jireen reer Borame, Goblka Awdlana ay wada yaallaan, ayay dhowr jeer isku laayeen dhinaca woqooyi taas oo markii dambe keentay in ay kala qaxaan labada beelood. Isku dhaca labadan beelood, Borame waxay markaas ku eedeyneysaa saameyn SNM…………….
Sunday February 23, 2020 – 14:19:55 in News by G. Good
MAQALEY WAR LAY MA LAGUU WARAMEY WAXA UU FARMAJO YIDHI Previous
HATE CONTENT Next